Yekumhanyisa mvura kutonhora Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line - China Yekumhanyisa mvura kutonhora Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
● Size sleeve yakagadzirwa nealuminium alloy, uye iyo yepamusoro inopfeka isingagadzike. Iyo tube waveform inogona kuverengerwa neakasarudzika software chirongwa, uye kuomarara kwemhete kunogona kuwanikwa pahuremu hwakaenzana.
● Mvura inotonhora inobaiwa jekiseni pazvikamu zviviri zvinoumba uye zvinodzosera (mhando dzakadai mumusika dzakatonhorera mweya uye pasina mvura).
● Muchina wekuumba une chakakosha dhizaini kunyatso deredza dislocation yepombi (ine patent kudzivirira).
● Muchina wekuumba une chakakosha dhizaini kunyatso kumisa kukwidziridzwa uye nekuona kuti module haizogadzike (ine dziviriro patent).
● Ipuratifomu ine mudziyo wedhairekitori, iyo inogona kuona yakaenzana mukana weforoma base.
● Kugadzikana kwevhavha kunogona kuvandudzwa nebhokisi rekutsvaira remuchina wekuumba.
● Muchina wekuumba une magetsi ekuchengetedza, izvo zvinogona kuve nechokwadi chekudzora kwakanaka kwemidziyo kubva panzvimbo yekugadzira kuitira kana simba pakarepo rikundikane kudzivirira kukiya
● Sisitimu yakakosha yetiyiti yemvura inogona kuve nechokwadi chekuyerera kwepamusoro kwemvura inotonhodzwa mukati me module (ine dziviriro patent).
● Kufamba kwefuremu yepasi uye furemu yepamusoro zvese zvakagadziriswa zvemagetsi.
mhando Pipe saizi (mm) Max.Speed ​​(m / Maminitsi) Zvose simba (KW)
1.Nguva yevimbiso ndeye 1 gore uye basa rinowanikwa kweupenyu hwose. Mutengo wezvikamu zvakaputsika uchavharwa nemutengi, asi panguva yekuvimbisa, mutengo wezvikamu zvakaputsika uchavharwa nemutengesi, kunze kwezvikamu zviri nyore zvakaputsika uye zvikamu zvakakuvadzwa nezvikonzero zvevanhu.
2.Nyanzvi yedu ichapindura chero kubvunza mukati meawa 24-48 uye ichagadziriswa nekukurumidza sezvinobvira.
3.Mutengi anogona kutumira mainjiniya kukambani yedu yeJWELL yekudzidziswa
4.Tinopa magwaro akazara ehunyanzvi uye madhirowa ehukama ezvikamu zvemagetsi muChinese neChirungu
5.Tichatumira matekiniki akakwana kukambani yeMutengi kuti aise uye atumire michina.Mutengo wakakonzerwa nenyanzvi dzemutengesi munyika yevatengi (kusanganisira tikiti rekufamba pakati peChina nenyika yeMutengi, traffic yemukati, mari yekurapa, pekugara, kudya kwemanheru uye. zvichingodaro) zvichavharwa nemutengi
PC PMMA GPPS Sheet & Plate Inowedzera Mutsara